हरितालिका तिज एक विश्लेषण – Gaule Media ::
Home/अन्य/हरितालिका तिज एक विश्लेषण
हरितालिका तिज एक विश्लेषण
Gaule media २६ भाद्र २०७५, मंगलवार १५:३६
पं. कृष्ण प्रसाद लामिछाने
वैदिक सनातन धर्मले व्रह्माण्डको सृष्टि, स्थिती र संहार ( उत्पति, पालन) को अवस्थालाइ अविछिन्न चलायमान गतिलाइ कामय गराउँदै विश्वकल्याणकारी मार्गलाइ अवलम्वन गर्दै आएका धार्मिक मर्यादाको पालना गर्ने व्यवस्था संविधान उद्घोष गर्दै वेदले पश्येम शदःशतम् जीवेम शरद शतम् भन्दै धार्मिक चाडपर्व समय अनुकुल सृजना गराइ यस्ता पर्वबाट मानवीय मूल्यमा आधारित जीवन पद्धति ( सत्य, धर्म, शान्ति, प्रेम र अहिंसा) अवलम्बन गरि सनातन पूर्विय दर्शनले (प्रदर्शन) निर्देशन गरेका मार्ग पछ्याउँदै धर्म, अर्थ काम र मोक्ष गरी ४ पुरुषार्थ पूरा गर्नु जीवनको लक्ष्य हो । यसै मध्ये एक चाड हो हरितालिका तिज ।
हाम्रा माहान स्रष्टा पूर्वजहरुले नारिहरुलाइ मान सम्मान गर्दै भाद्र महिनाको शुक्ल पक्ष द्धितिया तिथि बाट पञ्चमी सम्म ४ दिनलाइ नारीका लागि विशेष पर्वका रुपमा लिइन्छ , विश्वको सृष्टि प्रकृति र पुरुषको संयोगबाट हुन्छ नकि पुरुषबाट सम्भव छैन । अतः प्रथम प्रकृतिको पूजा विना कुनै कार्य सम्भव हुँदैन ।
नेपाली व्याकरणमा नाम सर्वनाम विशेषण इत्यादि अन्तर्गत नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाइ सर्वनाम भनिन्छ । यहाँ स्त्रि वाचक रिता, सिता, राम राधा कृष्ण उमामहेश्वर मातापिता यि सबैमा स्त्री लिङ्ग अगाडि छ । तिनीहरु नारिहरुलाइ भनेको तिनीहरुलाइ जानु या चिन ,रक्षा गर , संरक्षण गर महत्व बुझ वुज हुँदै तिज भनेको हो । हरि भनेको प्रकृति हो । प्रकृतिले दिएका नियमलाइ पालना गरयौ भने या प्रकृतिको संरक्षण गरयौ भने सारा व्रह्माण्डको रक्षा हुन्छ । वेदयुक्ती हुन्छ भनेको हो न कि हाम्रो संस्कृतिलाइ राम्रो सँग नबुझी पश्चिमेली सभ्येतामा वहकँदा विकृतिले पर्यावरण वढ्न थालेको छ ।
तिजको ४ दिनको अर्थ
तिजको पहिलो दिन दर खाने चलन भनेको कुनै पनि धर्म कुनै त्रुटि हुन सक्छन तिनलाइ सुधार गर्नु मानवको धर्म हो भने त्रुटीलाइ विकृतिलाइ लैजानु अधो गतितिर धकेल्नु हो । स्त्री जातलाइ जन्म माइती घरमा आइ माइतीले नैतिक शिक्षा दिइ तिमी टुहुराहरु वलिया वन , स्वावलम्वी वन, पुरुषको मात्र दास नवन भनी सत्वको खान खुवाउने हो तर आज भोली मासु र मदिरा र भोज दरमा परिणत भएको छ ।
दोस्रो दिन उपासक तृतिया तिथीमा
उपवास तिथिमा दिनभर व्रत वसी आफ्ना पतिको दिर्घायुको कामना गर्दै असल पति पाउने , शिवको आरधाना गर्ने चलन हो । यसको वास्तविक अर्थ भनेको उप+वस, उप भनेको नजिक र वास भनेको बस्नु हो । शिव भनेको कल्याणकारी नारी हरुले जहिले पनि दयाको खानी, परोपकारी, सहनशिलता यस्ता गुणले भरिपूर्ण मातृत्व भावले नै कल्याणकारी शिवलाइ प्राप्त गर्न सक्दछन् । विश्वमा यस्तो वस्तु छैन कि जो शान्ति नचाहने, कल्याण , दया, नम्रता नचाहने । त्यसैले यस दिन के पुरुष के नारी नभनीकन कुनै जातिय लिङ्ग भेदभाव नगर्ने सन्देश बाहक चाड त्यसै गरी नारी शक्ति उपासनद्धारा नै विश्वमा शान्ति छाउँदछ न कि भोकै बस्दैमा व्रतको पूर्णता पाउँछ । जसरी एक नारीले आफ्ना पतिको लागि व्रत बस्छिन् भने पुरुषले पनि आफ्नी पत्निको लागि व्रत गर्नुपर्दछ तव मात्र उपवास हुन्छ ।
तेस्रो दिनमा गणेश भगवानको पूजा आराधाना गरिन्छ । गणेश भनेको कुनै पनि कार्यसमाप्ति गर्नु जीवनमा जस्तो सुकै विघ्न आए पनि समस्याको समाधान गर्ने शक्ति प्रदान गरुन भने मोक्ष प्राप्ती ।
चौथो दिन , पञ्चमी , ऋषि पञ्चमी
ऋषि पञ्चमी भनेको प्रकृतिको पुजन संरक्षण , संवद्र्धन गर्नु हो । यस दिन विहान सवेरै शुद्ध जलमा स्नान गरी सप्तमृतिका लेपन गरी ३६५ दत्तिवन सेवन गरी वाह्य शरिर तथा आन्तस्करण मन वुद्धि चित्त शुद्धि गरी जीवनलाइ सार्थकता बनाउने पर्व र जसरी जीवनलाइ फुल फुलाउनको लागि माटो , पानी, हावा, सूर्यको किरण को आवश्यक पर्छ । त्यसै गरी असल सन्तान उत्पादनका लागि नारी पुरुषमा जीवनयापनद्धारा सभ्य र सुन्दर जीवनका लागि ऋषिको जस्तो तपस्या जरुरी छ । भने क्षणभङ्गुर जीवनमा घमण्ड गर्नु पञ्चमीको सार्थकता हो । यो चाडले छोरीको जीवन माटाको भुड्काको जीवन सरह हो । त्यसैले जीवनमा सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ । पश्चिमेली संस्कृतिले हाम्रो महान चाडलाइ विकृति तिर भित्रयाउँदै मानव सभ्यता नै विनासकारी बन्न पुगेको छ । यस्ता महान चाडको संरक्षण गर्नु र यसको वास्तविक कुरा वुझेर तिज मनाउनु उपयुक्त हुन्छ । हरितालिका तिज २०७५ को हार्दिक शुभकामना ।
लेखक ः नेपाली हास्य टेलिसिरियल लोक्रो न बोक्रो का कलाकार एवम् नेशनल एफ एम ८८.२ मेगाहर्ज ज्योतिष परामर्श कार्यक्रम प्रस्तोता ः पं. कृष्ण प्रसाद लामिछाने ।
२२ कार्तिक २०७४, बुधबार ०३:२२